आज २०७७ कात्तिक १७ गते सोमबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
सृजना पोख्रेल/सेतोपाटी एउटै सेन्टेन्समा कति धेरै इङ्ग्लिस वर्ड युज गर्ने भइएछ। कस्तो नर्मल वर्ड पनि बिगारिने छ्या! अब त शुद्ध नेपाली बोल्छु। ग्रामर बिग्रिए पनि कम्तीमा वर्ड शुद्ध युज गर्छु। मनमनै पनि शुद्ध सोच्छु। अहिल्यैबाट स्टार्ट गर्नुपर्‍यो। जस्तै नर्मल इङ्ग्लिस वर्डलाई पनि नेपाली वर्डले रिप्लेस गर्छु। यो पाराले त भएन! ह्यात्तेरीका! ‘रिप्लेस’ लाई नेपालीमा के […]